पुरुष र महिलाहरुको लागि टक्कर टैटू डिजाइन आइडिया
sonitattoo अगस्ट 9, 2016
तपाईं #ankle टैटू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईंको लागि शुभ समाचार किनभने यो धेरै लोकप्रिय भएको छ कि धेरै मानिसहरूले कथाहरू बताउन यसलाई प्रयोग गर्दैछन्।
के तपाईं टटू लगाउँदै हुनुहुन्छ? यदि तपाईं डराउनुहुन्छ भने आराम गर्नुहोला किनभने तपाई मात्र अनुभव गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ।
फूल टखने ट्याटू
तपाईंको पहिलो # ट्याटिया प्राप्त गर्न भयानक र रोमाञ्चक अनुभव हुन सक्छ। त्यहाँका प्रश्नहरू छन् जुन तपाईं सोध्न चाहानुहुन्छ र यसको खोजी गर्न गल्ती गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाई गलत गल्ती गर्नुहुन्न।
प्यारा टखल टैटू
तपाईंको टटुट गर्नु अघि तपाईंले जान्नुपर्ने कुराहरू छन्। तपाईंले यो प्रक्रिया बढाउनु हुँदैन। शैली, #design र देखो एक टैटू को केहि महत्वपूर्ण पहलुहरु।
सरल टखने टैटू
तपाईले सोच्नु भएको अर्को चीजहरू कलाकार हुन् र तपाईं स्याही हुनुहुन्छ। तपाईँले अनलाईनमा अनलाइन डिजाइनहरू हेर्नको लागी समय सकिनै पर्छ।
शक्तिशाली टखने टैटू
तपाईंको कलाकारको रूपमा एक डिजाइनको साथ तपाईले साँच्चै चाहनुहुन्छ के # स्त्री प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
कूल टखल टटू
त्यहाँ धेरै अद्वितीय टटू डिजाइनहरू अनलाइन छन् जुन तपाइँले चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यस टटू जस्तै धेरै डिजाइनहरू छनौट गर्न असक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाइँको कलाकारले तपाइँको डिजाइन अनुकूलन गर्न सक्छ।
तपाईंले आफ्नो छनौट गर्न सक्नु अघि तपाई डिजाइनबाट सन्तुष्ट 100% हुनुपर्दछ।
डिजाइनर टखल टैटू
तपाईंले आफ्नो स्याही जाँच गर्न सक्ने पार्लरको समीक्षा गर्नुपर्छ। यो जानकारी प्राप्त गर्न सबै भन्दा सरल तरिका हो जब तपाइँ अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई हेर्नको लागि दृष्टान्त गरिएको छ।
पुरुष टखने टैटू
यदि तपाइँ त्यहाँ त्यहाँ के के स्पष्ट चित्र प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँले पार्लर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य स्तर, संरक्षक र कलाकारहरू तपाईंको टटू डिजाइन सुरु गर्नु अघि केहि कुरा हो जुन विचार गर्नुपर्दछ।
इन्फिनिटी टकलेट टैटू
प्रश्नहरू सोध्नुहोस् यदि तपाइँसँग यो असाधारण टैटू हुनुपर्दछ। दायाँ ट्याटू केहि चीज हो जुन तपाईले यसलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न।
यसका लागि राम्रो टटू प्राप्त गर्न, तपाइँसँग मात्र प्रश्नहरू सोध्नु पर्छ कि तपाइँ आफ्नो कलाकारसँग सही ट्र्याकमा हुनुहुन्छ भन्ने निश्चित गर्न।
जब तपाईं यो प्रक्रिया संग सहज हुन्छ, तब तपाईं टैटू प्राप्त गर्ने लक्जरी हुन जाँदै हुनुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई बुझ्नुहुन्छ कि यो टैटू डिजाइन आवश्यक भएको छ। तपाईंले आफ्नो छनौट छनौट गर्नु अघि तपाईले टंकको अनलाईन सङ्ग्रहमा खोज्नु पर्छ। पहिलो पल्ट तपाईंले गर्नु पर्छ एक टैटूवादी हो जसले तपाईंलाई बताउनेछ कि क्याभ मा छ।
यदि यो तपाइँको ट्याट्ट प्राप्त गर्ने पहिलो पटक हो भने, हामी सल्लाह दिन्छौँ कि तपाइँ साना सुरु गर्नुहुन्छ। छवि स्रोत
स्टार टकलेट टैटू
टखने टटूको चालाक र सूक्ष्मले तिनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो खोजी गरे। यो केवल महिलाहरू होइनन् जुन यो टैटूको लागि माग गर्दै छन् तर पुरुषहरूले सुन्दरताको कारण यो पहिरनलाई प्रदान गर्दछ। छवि स्रोत
क्रिएटिव टखल टैटू
धेरै पटक टटू प्रयोगकर्ताहरू प्राय यो टटूको लागि जान्छन् किनकी यो न त सार्थक छ न त धेरै। यसले तपाईंलाई आत्मविश्वास प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ कि तपाईलाई सताउन अघि तपाईं इच्छुक र जंगली जान सक्नुहुन्छ। छवि स्रोत
फूल टखल टटू
मानिसहरू किन सानो सुरू गर्छन् कारण तिनीहरू टेटोटो गएका थिए किनकि प्यारीको रूपमा हो किनभने तिनीहरू यसमा थप कुराहरू थप्न वा यसलाई बदल्न मनन परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। छवि स्रोत
पत्ता खुट्टा टैटू
हामी आफ्नो टैटू को लागी केहि चीजहरू बुझ्न चाहन्छौं। सबै ट्याटोहरू चोट लगाउँदा तपाईंलाई टिका लगत्तै टटू लगाइदिन्छ। छवि स्रोत
गुलाब टकलेट टैटू
यद्यपि, हामी जान्दछौं कि यी टैटटोहरूको केहि भन्दा बढी पीडितहरू हामी संवेदनशील छाला, भित्री चीज, छाती र भित्तामा पाउँछौँ। छवि स्रोत
बिर्सने छैन कि तपाईंको हड्डी नजिकको छाला खराब छ जब तपाई यसलाई जाँच गर्दै हुनुहुन्छ। छवि स्रोत
पक्षी टखने टैटू
जब तपाईं टिका लगत्तै टटुट गर्दै हुनुहुन्छ, दुखाइ धेरै छैन किनकि धेरै मानिसहरू यसको लागि जान्छन्। छवि स्रोत
डबल टकलेट टैटू
कारण यो हो कि तिनीहरू सधैँ नाजुक र सानो हुन्छन्। त्यहाँ टाटुको दर्दलाई सम्हाल्न सक्दैन गर्नेहरूको समाधान हो। उनीहरूले सबैलाई गर्न आवश्यक छ कि एक सूखा ट्याटू बन्दूकको लागि जुन स्थानमा स्याङ्किङ्गको आवश्यकता छैन। छवि स्रोत
विशेष गुलाब टखल टैटू
तपाईं सुन्दरतालाई हराउन सक्नुहुन्न जुन यस प्रकारको ट्याटूको स्याहारको साथ आउछ। हामीले गुलाब टैटूहरू देखेका छौं तर तपाईले आफ्नो टचमा यो ट्याटूको सानो रचनात्मक सिर्जना गर्दा, यो स्पष्ट रूपमा ठूलो प्रभाव पार्छ। यो एक प्यारा टटू प्राप्त गर्न समय लाग्छ। तपाईंले गर्नु आवश्यक छ एक पेशेवर कलाकार प्राप्त गर्न को लागि चित्रकारी बनाउन को लागि। छवि स्रोत
अनुकूलित अद्भुत टखने टैटू
अधिक टखल टटू डिजाइन को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस
अनन्तता टटूकम्पास टैटूपुरुषहरूको लागि टैटूपैट टैटूkoi fish tattooगुलाब टैटूहरूतीर टटूचन्द्र टोटोटोछाती टैटूहरूट्याटुहरू केटीहरूको लागिटैटू विचारहरूरिप टैटूFeather Tattooसिंह टटटोहरूगर्दन टैटूहरूतितली टैटूहरूपक्षी टैटूहरूक्राउन टैटूहरूदूत टैटूज्यामितीय ट्याटुहरूफिर्ता ट्याटोहरूहात टाटाटोसओटोपस ट्याटूयुगल टैटूहरूआँखा टटूसूर्य टैटूहरूकमल फूल टटूबहिनी टैटूहरूहृदय टटटोटखने टैटूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूईगल ट्याटोआदिवासी टैटूहरूहात्ती टटूक्रस टैटूप्यारा टैटूहरूहेनना टैटूआस्तीन टैटूहरूहीरे टैटूwatercolor टटूबिल्ली ट्याटोहात ट्याटोससबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूचेरी खिलौना टैटूबिस्कुट टटूप्यार टैटूmehndi डिजाइनफूल टैटूहरूएंकर टैटूहरूसंगीत टैटूहरू